आज सातै प्रदेशले बजेट ल्याउँदै (कुन प्रदेशको कति बजेट ?) ~ नेपाली समाचार | Latest News from Kathmandu, Nepal
आज सातै प्रदेशले बजेट ल्याउँदै (कुन प्रदेशको कति बजेट ?)
By नेपाली कान्छा on 10:37 PM | nepali news, nepalnews, नेपाली खबर, समाचार | No comments
काठमाडौं । संबैधानिक ब्यवस्था अनुसार आज (आइतवार) देशका सातवटै प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/ ७७ को बजेट ल्याउन सात प्रदेशले तयारी अन्तिम चरणमा पुरयाएका छन् । सात प्रदेशले कूल २ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने प्रारभीक अनुमान गरिएको छ ।
अघिल्ला बर्षभन्दा केही ठुलो आकारमा प्रदेशले बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् । प्रदेश १ ले ४० अर्ब, प्रदेश २ ले ३५ अर्ब, प्रदेश ३ ले ५० अर्ब, गण्डकी प्रदेशले ३२ अर्ब, प्रदेश ५ ले ३५ अर्ब, कर्णाली प्रदेशले ३३ अर्ब र सुदूरपश्चिम प्रदेशले २९ अर्बको बजेट ल्याउने अनुमान गरिएको छ । अघिकाँस प्रदेशले बजेटमा सडकलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छन् । सडकसँगै कृषि, पर्यटन, खानेपानी र उद्यमलाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरेका छन् । प्रदेश १ सरकारले चालू आर्थिक वर्षको भन्दा १५ देखि २० प्रतिशत ठूलो बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।
प्रदेश २ सरकारले करिब ३५ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । अघिल्लो बर्ष २९ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । प्रदेश नम्बर ३ सरकारले सुरुङमार्ग, चक्रपथ, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्राथमिकतामा राखेर करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउँने तयारी गरेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ३२ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरको छ।
प्रदेश ५ सरकारले दीर्घकालीन महत्वका रणनीतिक योजना समेटेर चालू आवका लागि ३५ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रदेश ५ सरकारले गत आवमा ३५ अर्ब बराबरको बजेट ल्याएको थियो।
कर्णाली प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजारको बजेट ल्याएको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि करिब २९ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ।